On emashalofini ezitolo zethu ngesinye isikhathi kunzima ukuthola esihlwabusayo futhi unempilo ngesikhathi esifanayo (noma okungenani hhayi eyingozi) juice, okungase ukuphuza abadala kanye nezingane. Ukungabaza kubangele inala ushukela, khona udayi futhi amakhemikhali. Ososayensi nhlobo kungase kutholakale ukuthi ngamazinyo ayo ezipakishiwe ukuwohloka ngokushesha esuka soda. Phakathi lonke esitolo edonsela inala emehlweni "Teddy" - juice, okungakwazi bahlala banganandaba.
Injabulo yemvelo ukuthi izingane uthi?
Izingane eziningi ezincane abanandaba kakhulu izaqathi. Babhekisela ifomu ungakujabulisi, ngaphandle ukunambitheka evelele ubumnandi noma sourness, ubunzima zemifino. Futhi okwamanje isanqante uye impahla kubuhlungu ngempela ukuba babhajwe Zubkov zezingane, okuyinto futhi akekho othanda. Kodwa lokhu kuyinto yemifino emangalisayo ewusizo enikeza isitokwe obuningi emzimbeni yethu amavithamini, macronutrients. Ngakho, umpe lwawo - kuyinto inhlanganisela yokuqala omuhle nokunambitheka!
"Teddy" - isanqante juice, okuyinto ahlanganiswe vitamin C odingekayo ngosuku Omunye ibhodlela oqukethe umthamo watusa uvithamini A no-C Kodwa, mhlawumbe, ukuheha izethameli, akwanele ukuba amemezele juice Umbuso indawo, nayo ine- ukunikeza ukunambitheka ocebile ngempela futhi enamandla egcwele. Izingane kuzame okokuqala, uthi kwabantu ezimnandi, okuyinto kubonakala esigubuzele esiswini, uyasondla futhi anika. Juice bakhangwa heterogeneity yayo, ukufakwa ezifanele izithelo nemifino, ngenani eliphusile ushukela kwengoma. Kodwa abazali sigxile isikhashana engalindelekile: koonyana uphuze umpe, "Teddy", abanakho umqondo ukoma, okungadingi abohle ngisho nangemva soda noma ubisi. ibhodlela Small kwanele ingane, futhi umuntu omdala, acime ukoma kwawo futhi babengase baphazamiseke, bangabe ezinye izinto.
Ubani nje nempela owayeke ukuyichaza ukwenza juice ngezithako okunempilo? Ohlwini "ezweni lendabuko" Poland wabonisa ukuthi kwandisa isilinganiso komkhiqizo emehlweni izakhamuzi: azinakho ekhoneni egumbini kuthululwe, futhi avela ePoland uqobo enophephela juice, "Teddy." Umkhiqizi - Iqembu Maspex Wadowice, ngenhlanhla, ungumholi e-ingxenye ukudla phakathi izinkampani e naseYurophu eMaphakathi neseMpumalanga. Kwakuwusuku ilungelo lokumaketha indlela - ukugembula on isigaba ewumngcingo kwezimpahla. Inkampani bekwi-ukukhiqizwa ayo, nectars neziphuzo. Ukuthunyelwa embozwe Poland hhayi kuphela, kodwa futhi Czech Republic, Slovakia, eHungary, eRomania-Bulgaria, Lithuania, futhi-ke, i-Russia. Izwe lethu nje akakwazanga ukuhlala kude. Ngokuhamba kwesikhathi inkampani okuye kwaba uqobo ekukhiqizeni imikhiqizo osheshayo - cappuccino, ukhokho, itiye, futhi eRomania umise ngokwaso njengoba umhlinzeki eyinhloko pasta.
Isu juice ukukhiqizwa
Abakhangisi baqonde ukuthi awukwazi ukwenza umkhiqizo ngaphandle ocacile futhi ikhasimende orientation, kungenjalo akukho mqondo lowo kuyodingeka. "Teddy" - juice, okwenza ukubheja empilweni. Kungani kumelwe uzihluphe amakhemikhali uyinqaba, izwe ngokwalo unika konke ukunambitheka omuhle?! Lokhu kuvumelana abakhiqizi, omama abaningi, ngoba ngesinye isikhathi kunzima kangaka ukuthi abantu bawathole ingane ubumnandi badla imifino okunempilo kanye nezithelo. Ukuze uphawu senzeka yayo ezingqondweni abathengi, kubalulekile ukusebenza njalo ngcono yayo. Maspex Wadowice Iqembu cishe emakethe ekhulwini-quarter - isikhathi eside, phakathi kwesikhathi lapho lwalumumethe 15 bayalimala futhi wasibona sigcwele emazweni angaphezu kuka-50. Ngokwanele ukuze abangele inhlonipho umthengi, okuyinto isimo ebalulekile inkampani nokufeza yayo.
Okubalulekile abantwana umkhiqizo? Phela, lapho uya esitolo, awazi ukufunda ilebula, futhi ngezinye izikhathi ngisho ukubheka igama. Into esemqoka - kungcono ukukhanya, ukufudumala, omuhle. Mangisho ukuthi kulesi sici, "Teddy" - juice akunakuqhathaniswa. Ngingalutholaphi ibhodlela enhle futhi elula? Izingane aphansi abasesikoleni efana ijusi sibonga isitsha sokuqala. Bathi it kalula futhi sizikhandle esifanelana yesandla sakho. Kusukela ngo-2010, umenzi bashintshele nomthamo 0.3 amalitha futhi ifomu ekhethekile container nge inkatho bushelelezi, lapho umkhiqizo kulula ukubamba. Ukuze abazali abanothando kubalulekile ukuthi ibhodlela ezenziwe ngengilazi obukhulu, ngakho-ke kunzima kakhulu ukugqashula kuyo. Ibhodlela phezulu lihlotshiswe "imilenze" ngokuthi "Teddy" - juice brand izakhi futhi ukuklanywa. Lokhu juice kuyinto elula ukunikeza ingane esikoleni. omama abasakhula uyavuma ukuthi lo mkhiqizo wemvelo kungaba kwasemini enkulu.
Mhlawumbe kungaba isidina ukuthenga isikhathi ngasinye nje juice "Teddy" isanqante. Izibuyekezo omama kanye obaba emhlabeni wonke ibonisa ukuthi okuthandwa zezingane kukhona edlulayo: namuhla ingane uthanda izaqathe, kodwa kusasa ke enqaba ukudla, ngisho izinto eziningi ziyantula. Liyini ikhambi? Yiqiniso, musa uhlanganise! Ukuze ukhululeke, abadala baphuze cocktail, nezingane - juice. inhlanganisela Original izaqathi and bananas ne ukwengeza okusajingijolo kanye sitrobheli. Mpango ukunambitheka akunakwenzeka, kodwa ukuze ikhulise - sicela! Izaqathi isici uhlala ingashintshiwe, ie supply carotene ne amavithamini akusho yehle, kodwa lolo ngesimo ubhanana kanye raspberries uyokhanga izingane ezingezwakali kakhulu.
Nambithani - lokho kulungile, kodwa abantu ukuba bakhethe juice, "Teddy", ukwakheka kumele kube obuphathekayo. Ithi kwilebula? Kuyinto engokwemvelo isanqante juice nge uginindela. Ayikho amaprotheni njengoba amafutha, kodwa carbohydrate - 11.2 g Ukwakheka - isanqante puree, amanzi, ushukela, citric acid, elawula asidi, no-vithamini C. Ngo amagremu 100 juice - okunama-kilojoule angu-42. yilezozintombi Abaningi ehlezi ekudleni, siphawula ukuthi kilojoule kakhulu, kodwa juice ngokushesha ayegcwele, okuyinto limnandi kakhulu. Girls-abasubathi bathi emaphaketheni kuyinto elula ukuthatha nawe isidlo emva Amazing. Ukunambitheka mkhulu futhi izinzuzo eziningi, futhi ngeke kilojoule usuku lonke. Ngaphambi ukusetshenziswa, ijusi kufanele ushukunyiswe, njengoba uginindela ivame ukuba ezizika phansi. inkampani yokukhiqiza iphawula ukuthi "Teddy" - juice elenziwe usebenzisa yesimanje pasteurization uhlelo, homogenization futhi deaeration. Wathela ashisayo, okungukuthi, kungenzeka kwamagciwane kokuthola iqedwe ngokuphelele.
It lingahunyushwa baphetha ukuthi "Teddy" - juice, eziwusizo ngazo zonke izindlela, ngoba isanqante edingekayo nenkathi ebandayo. Ukwakheka kwalo - enzyme oluyingozi, okuyinto amabutho ukulwa Amagciwane, yokufisa sengathi shaya ingane yakho, futhi wena. Akubalulekile ukuyeka ukusetshenziswa siqu juice, "Teddy." Lapha futhi potassium, ne-magnesium, ne phosphorus iodine - ukuqinisa amathambo futhi ashona amavithamini ewusizo ngasiphi yobudala. Ukuhlukumeza, yebo, futhi ngeke kukusize ngalutho, kodwa uma uphuze umpe ngokulinganisela, bathi, ingilazi ekuseni, kungenzeka ukuze uvikele i zokuvimbela omuhle kakhulu imikhuhlane izifo. Amasosha omzimba uyoqina kakhulu, isimiso sezinzwa - esitebeleni, futhi ngeke yokuwuthola ukucindezeleka, ngoba kuphela abambelele lapho izinzwa kukhona bushelelezi.
Carrot ngamabomu Kunconywa isifo sezinso, isibindi gallbladder. Okuhle Ukuthi liseluhlaza, kodwa ngaso sonke isikhathi ezihlwabusayo, kodwa uma izaqathe yashizi uthele ijusi obukhulu ilungele dessert omkhulu ukuthi kuvusa isimiso sokugaya ukudla bungene lokuqinisekisa ukusetshenziswa ngemfanelo. Izazi zokudla kwesokudla ukuqaphela ukuthi ijusi-kilojoule amaningi ngeke uqambe, phela, futhi kukhona ingxenye ushukela, ama-calories, kuba ufana ubisi noma isiphuzo. Kodwa lo mkhiqizo normalizes umzimba, ivikela namazinyo ukuba kungonakali, uyasondla izinzipho, izinwele kanye isikhumba. Bewazi yini ukuthi ijusi isanqante ungalenza ibuyise acuity ezibukwayo? Lezi zifo eziwuhlupho ezifana blepharitis, conjunctivitis nokungacabangeli ikusasa banal, ungakwazi linyamalale. Ukuqina juice ezithambile kungaba isidlo omuhle emsebenzini, njengoba ondla kunciphisa ukukhathala, uyasondla. Ngaphezu kwalokho, ibhodlela elincane kalula kuhambisana ngisho esikhwameni olunembile kakhulu ngaphandle akunika iphunga kungenzeka ethusayo spillage.
Isithombe kungaba ngokuphelele ephelele uma ungenawo zithi ngalabo kangcono uyeke ukusetshenziswa isanqante umkhiqizo. Nakuba eyigugu kakhulu isiphuzo juice, "Teddy", ukubuyekezwa basikisela ukuthi kubalulekile ukuphuza ngokulinganisela, ezifana ibhodlela ngosuku. Overdose kungathinta ehlukile zonke. Othile uyokwenyuka uzizwe ungumqemane futhi kungazelelwe lapho othile eqala ukuzwa ukukhathala, isicanucanu. Izaqathi ungaba yisikhulumi esihle allergen, ngakho kungcono uyeke ukusebenzisa kwayo uma iguliswa noma izindawo yellow on isikhumba esingeke silibalekele. Ngeshwa, kungcono ukuba ayiyeke le juice isanqante kubantu abaphethwe esiswini hyperacidity, izilonda, kolwelwesi noma isifo sikashukela. Ukuze unciphise inombolo imikhakha izakhamuzi abangakwazi ukunambitha ijusi, umenzi ukhiqiza zonke okuthandwa entsha "Teddy" nge eziningi apula, ama-raspberry, ikiwi ngisho strawberry.
Indlela Roll apple juice? Apple juice ebusika: Recipe
Umalusi Russian: incazelo kanye izici zohlobo, izithombe
Amabhethri Electric nezinhlobo zabo. usayizi ibhethri kagesi. radiators kagesi for engadini udonga: izibuyekezo, izithombe
Jelly ikhekhe - amnandi ngokuba mncane.
Kunyatheliswa Endryu - uMbusi York. Biography, izithombe
Rest edolobhaneni Kabardinka. Indlu yetivakashi "Uthando" nezinye impesheni zamanani aphansi
Intamo uhlomo wezingulube. ongakhetha marinades
Uhlelo "Izindawo Bakwethu." Uhlelo Izindawo Bakwethu eRussia
Dream Ukuhunyushwa: Igazi ephusheni